Coffee – Healthy Life Journal
—————၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—————- Q. တချို့လူတွေက ကော်ဖီကောင်းတယ်၊ တချို့က မကောင်းဘူး စသဖြင့် အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာကြောင့် ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေး အကောင်း၊ အဆိုးကို တိတိကျကျ သိချင်ပါတယ်။ A. ကော်ဖီသီးသန့်က ကယ်လိုရီတော့မပါဘူး။ ကယ်လိုရီမပါတဲ့အတွက်...
နှပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီမှုန့်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပရေးရာ အသုံးဝင်ပုံများ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက လူသန်းပေါင်းများစွာဟာ ကော်ဖီကို အလွန်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အိမ်တွေမှာလည်း ကော်ဖီမှုန့်ကိုနှပ်ပြီး သောက်လေ့ရှိပါတယ်။ နှပ်ပြီး ကျန်တဲ့ကော်ဖီမှုန့်အနှစ်တွေကို လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ အဲဒီကော်ဖီမှုန့်အနှစ်တွေကို သုံးတတ်ရင် အိမ်တွင်းကျန်းမာရေး၊ အလှအပရေးနဲ့ တခြားကောင်းကျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ (၁) လက်အနံ့အသက် ကောင်းစေခြင်း သင့်လက်မှာ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီနံ့တွေ...
လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီနှင့် ရင်တုန်ခြင်း . . .
မေး – လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီသောက်ရင် ရင်တုန်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ရောဂါအခံ ရှိနေလို့ပါလား။ ဘယ်လို လူမျိုးတွေက လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီသောက်ရင် ရင်တုန်တာ ဒါမှမဟုတ် အသားတွေတုန်တာ ဖြစ်တတ်ပါ သလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ မာမာစိုး၊ နတ်မောက်။ #...
၀မ်းချုပ်ခြင်းအတွက် သဘာဝ ကုထုံး
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ၀မ်းချုပ်တာကြောင့် လေပွတာနဲ့ ဗိုက်အောင့်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၀မ်းချုပ်ရင် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းစနစ်မှာ ကျန်းမာရေး ပြဿ နာ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကြာလာရင် လိပ်ခေါင်း ဖြစ်တာ၊ စအိုကွဲတာ အစရှိတဲ့ ဝေဒနာတွေအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...